रुपा गाउपालिकाकाे २०७७/०७८ को नीति कार्यक्रम तथा बजेटको (पूर्ण पाठ) – NepalayaNews.com
रुपा गाउपालिकाकाे २०७७/०७८ को नीति कार्यक्रम तथा बजेटको (पूर्ण पाठ)
८ असार २०७७, सोमबार १३:५२
“रुपाको पहिचान सबै क्षेत्रमा समृद्धिको अभियान”
रुपा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को
आदरणिय गाँउ सभा सदस्य ज्यूहरु,
श्रम तथायुवा रोजगार :
1. कोभिड १९ कोरोना भाइरसको कारण धेरै युवाहरुको देश तथा विदेशमा रोजगारी गुमेको छ । यो विषम परिस्थितीमा यूवाहरुलाई रुपा भित्रै विभिन्न विधामा रोजगारी दिलाउनको लागि गाउँपालिकाको तर्फबाट यूवा तथा स्वरोजगार कोषको स्थापना गरी पूँजी नभएका व्यबसायीहरुलाई न्यूनतम व्याजदरमा ऋण दिने नीति लिइनेछ ।
2. यस वर्ष बैदेशीक रोजगारबाट फर्केका युवाहरुलाई पुन बैदेशीक रोजगारीमा जानका लागि निरुत्साहित गर्नका लागि पर्याप्त रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम अगाडी सारिनेछ ।
3. यूवाहरुलाई जनसुकै व्यबसाय गर्दा पनि पहिले तालिमको अनिवार्य रुपमा व्यबस्था गरिनेछ । साथै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु संग समन्वय गरी पूँजी नभएका यूवाहरुलाई सहुलियत ऋण गाउँपालिकाको तर्फबाट अनुदानको व्यबस्था गरिनेछ ।
1.आधुनिकीकरण, व्यबसाय र रोजगारीमा ब्यापकता सबै जनता (घरको) व्यबसायीक कृषि पशुमा सहभागीता भन्ने मुल नाराका साथ यस बर्षलाई कृषि बर्षको रुपमा मनाइने छ ।
2. युवा तथा स्वरोजगार कोष मार्फत व्यबसायीक कृषी पेशा गर्न चाहने तर पूँजीको अभाब भएका पेशा गर्न चाहने यूवाको लागि सस्तो व्याजमा रकमको व्यबस्था गरिने छ ।
3. उत्पादित बस्तु खेर नजाओस तथा बजारीकरणलाई सहज बनाउन कृषी एम्बुलेन्सको व्यबस्था गरि निशुल्क रुपमा कृषि एम्बुलेन्स मार्फत किसानको उत्पादित कृषि उपजगाउँबाट बजारसम्म पु¥याइनेछ ।
4.किसानलाई उत्पादित बस्तु बजार सम्म लैजानका लागि समस्या नपरोस भन्ने उद्येश्यले र नयाँ किसानलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि उत्पादनमा आधारीत अनुदानको व्यबस्था गरिने छ ।
5. किसानलाई फलफुल तथा तरकारीको विरुवा सहज रुपमा पाउन र उत्पादन गर्नको लागि समस्या भएकाले एक वडा एक नर्सरी स्थापनाकार्यक्रम लागु गरिनेछ ।
6.आधुनिक तबरले खेती गर्नको लागि जग्गा चक्लाबन्दी गरि नयाँ प्रबिधीका भौगोलिक बनावट अनुसारको हाते ट्याक्टर, थ्रेसर मकै छोडाउने मेशिन लगायतका यान्त्रीकिकरणलाई विशेष जोड दिइनेछ ।
7. किसानको उत्पादनलाई एकिकृत गरि बजारिकरण गर्नको लागि प्रत्यक्ष वडामा कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
8. व्यक्तिगत तथा समुहमा खेती गरि सामुहिक व्यबस्थापन गराई मल विउ घाँसको व्यबस्थापन गरि किसानलाई व्यबसायीक बनाउनको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा सबै कार्यक्रमहरुमा तालिमको व्यबस्था अनिवार्य गराईनेछ ।
9.साना किसानलाई उत्पादनमा जोड दिई एक घर एक करेसाबारी निर्माणको नीतिलिइनेछ ।
10. रुपा गाउँपालिका भित्र रहेका बाँझो जग्गालाई ब्यवस्थापन गर्न भूमि बैंक मार्फत् जग्गा ब्यवस्थापन गरी लिजमा लिने ब्यवस्था मिलाईएको छ । जग्गा चक्लाबन्दी गर्नको लागि ५०% अनुदानको ब्यवस्था मिलाईनेछ । चक्लाबन्दी गरेको जग्गामा अनिवार्य ब्यवसायिक खेती गर्नुपर्र्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
11. एक टोल एक कृषक समूह गठन गरिने छ । जसले गर्दा किसानलाई समूहमा खेती गर्न उत्प्रेरित गर्ने छ ।
1. पुँजीको अभाबमा व्यबसाय गर्न चाहने युवालाई युवा तथा स्वरोजगार कोष मार्फत सस्तो व्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराई स्वरोजगार बनाइने छ ।
2. किसानलाई व्यबसायीक पशुपालन प्रेरित गर्नको लागि एक टोल एक कृषक समूह गठन गरी व्यबसायलाई व्यापकता लिने नीतिलिइएको छ ।
3. अत्यन्त न्यून रुपमा रहेको उन्नत जातको पशुपालन व्यबसायलाई न्यूनतम १० प्रतिशत बनाउनकृत्रिम गर्भाधारणमा शतप्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
4. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसंग समन्वय गरी किसानहरुलाई सहुलियत दरमा ऋण प्रबाह गर्नको लागि आबश्यक समन्वय गरी व्यबसायीक पशुपालन र कृषिमा प्रोत्साहन गरिनेछ ।
5. कृषि र पशुपालन गर्ने किसानलाई समस्या नपरोस भन्ने उद्येश्यले घर घरमा कृषि प्राविधीकको उद्येश्य पु¥याउन मोबाइल मोटरसाईकल सेवा प्रबाह गरिनेछ । जसले गर्दा जुन किसानहरु समस्यामा परेको छ तत्काल किसानले कृषि प्राविधिक सेवा प्राप्त गर्नेछन् ।
6. अव्यबस्थित रुपमा मासुजन्य कटाईलाई व्यबस्थित गर्नको लागि गाउँपालिका भित्रका सबै वडामा एक एक वटा बधशाला निर्माण गर्ने नीति लिइएको छ ।
1. रुपा गाउँपालिका भित्र पर्यटनको गन्तब्य बनाउनको लागि यहाँको भौगोलिक, धार्मीक, सांस्कृतिक रुपमा रहेको रुपाको सम्पत्तिलाई अधिकतम रुपमा प्रयोग गरी पर्यटनको विकास गर्नसबै डाँडाहरु जोडेर बहुउद्येश्यीय पदमार्ग सहित शान्ती पार्क निर्माणको बृहत कार्य काम अगाडि बढाइने छ ।
2. यस गाउँपालिकाको पौराणीक रुपमा रहेको मठ, मन्दिर, मस्जीद, गुम्बाको संरक्षण गर्दे एक वडा तिन चौतारी निर्माण कार्यक्रम गरिनेछ । जसले गर्दा बर पिपलको संरक्षणमा पनी योगदान पुग्नेछ ।
3. आन्तरीक तथा बाह्य पर्यटनलाई लक्षीत गरि विभिन्न वडाहरुमा होमस्टे संचालनमा आइरहेको छ भने बाँकी रहेका स्थानहरुमा व्यबस्थित होमस्टे सञ्चालन र प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
4. पर्यटनको सम्भावना बोकेको यस गाउँपालिकाभित्र विभिन्न वडा तथा स्थानहरुमा भ्यू टावर सम्पन्न भै संचालनमा आएको छ भने बाँकी स्थानहरुमा भ्यू टावरहरुको निर्माण यस वर्ष सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याइनेछ । साथै कृषि, वन,पर्यटनलाई समेत प्रबद्र्धन गर्ने नीति लिइएको छ ।
1. “सामुदायीक वन जनताको आर्थिक समृद्धिको योगदान” भन्ने मुल नाराका साथ यहाँ भएको काठ, दाउरा, जडीबुटी लगायतका बस्तुको अधिकतम प्रयोग तथा वनको दिगो व्यबस्थापन गरी जनताको आयस्तर बढाउनको लागि वनसम्बन्धी सबैको साझा लगानीमा प्रशोधन उद्योगको रुपमा स्थापना गरी यूवाहरुलाई रोजगारीमा जोडीनेछ ।
2. वन संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्दे व्यबस्थीत वन सौन्दर्यकरण गरी वन्यजन्तु व्यबस्थापन संगै वन पर्यटनलाई प्रबद्र्धन गरिनेछ । साथै एक सामुदायिक वनलाई नमूना वन नर्सरी उत्पादन गर्न लगाइनेछ । साथै डढेलो नियन्त्रण तथा औजार खरीद गरिनेछ ।
1. रुपा गाउँपालिका भित्र ८० प्रतिशत घरमा एक घर एक धारा सम्पन्न भएको छ । बाँकी स्थानमा योजनाको संचालन भैरहेको छ । यस वर्ष सबै स्थानमा स्वच्छ र सफा पानी बनाउनको लागि खानेपानीमुल संरक्षणको नीति लिइनेछ ।
1. कोभिड १९ कोरोना भाइरसका कारण विश्वमा नै प्रभाव पारेको यो अवस्थामा रुपाबासी जनतालाई सुरक्षीत बनाउनको लागि कुनै पनी कसुर बाँकी नराखी रोगको रोकथाम, उपचार सहयोगको लागि रकम व्यबस्थापन गर्ने नीति लिइएको छ । स्वास्थ्यकर्मी लगायतको सुरक्षामा विशेष सतर्कता अपनाउने नीति लिइएको छ ।
2. विपद व्यबस्थापन कोष खडा गरी खाद्य सुरक्षा र स्वास्थ्य व्यबस्थापन गर्ने नीति लिइने छ ।
3. रुपाका जनताको स्वास्थ्यमा पहँुच होस भन्ने हेतुले सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ ।
4. स्वास्थ्य चौकी नभएका वडा नं.२ र ३ मा वडा नं. ६ र ७ को विचमा रहेको तालबेशीमा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरिनेछ । रुपा गाउँपालिकाको वडा नं. १ को स्यास्त्रीमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुचारु गरिनेछ ।
5. यस वर्ष बजारसम्म विरामी लैजाने बाध्यात्मक परिस्थीतिलाई कम गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा जनतालाई सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्नको लागि अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढाइनेछ । जसका लागि आबश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारको लागि चमेना गृह, फार्मेसी, एम्बुलेन्स, ल्याब व्यबस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ ।
1. रुपा गाउँपालिकालाई शैक्षिक हवको रुपमा विकास गर्ने नीति लिइएको छ । जसको लागि यसै बर्ष “एक्काइसौं शताब्दीको शिक्षाको आधार प्रविधिपूर्ण शिक्षको उपहार” का लागि लागत साझेदारीमा एक शिक्षक एक ल्यापटप उपलब्ध गराइनेछ साथै विद्यालयहरुमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गरिनेछ ।
2. तालिम प्राप्त शैक्षिक जनशक्ति उपलब्धीपूर्ण नतिजाको प्राप्तीका लागि तालिम कार्यशाला सञ्चालन गरिनेछ । स्थानीय विषयबस्तुको पहिचानका लागि स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास गरिनेछ ।
3. हालको विषम परिस्थितीमा शैक्षिक गतिविधी सञ्चालन गर्न बैकल्पिक विधिलाई अबलम्बन गरिने छ । स्वास्थ्य र सक्षमताका लागि खेलकुद विकासका लागि कार्यक्रम तय गरिनेछ । विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि बालविकास सहजकर्ता कक्षा शिक्षक तथा प्र.अ. प्रोत्साहन अंग्रेजी माध्ययमको पाठ्यपुस्तक शैक्षिक क्लालेण्डर शिक्षक डायरी पोशाक लगायतका कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
4. दक्ष जनशक्ति नै रुपाको विकासको मुल आधार हो, तसर्थ प्रदेश स्तरीय प्राविधीक शिक्षाको लागि रुपा गाउँपालिका भित्रका ३ वटै विद्यालयका शिक्षालाई मर्ज गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने नीति लिइएको छ ।
1. नयाँ बाटो र ट्रयाक नखोल्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ । यस वर्ष गाउँपालिकाको वडा कार्यालय सम्म पिच बाटो पु¥याउनको लागि प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरी समपूरक कोषबाट साझेदारीमा काम गर्ने नीतिलिइनेछ ।
2. रुपा गाँउपालिकाका रणनीतिक महत्वका मुख्य सडकहरु मध्ये शिशुवा पोल्याङटार सडक खण्डमा हाल पिच गर्ने कार्य चलिरहेको छ ।
3. रुपाकोट थुम्की सडक खण्ड पिच गर्ने कार्य सम्पन्न भै सकेको छ भने, वेगनास भोर्लेटार सडक खण्ड पिच गर्ने कार्य शुरु भै सकेको छ ।
4. रुपा रिङरोड, हाङगे वाङगे , शिवचण्डी मोटरबाटो केन्द्र र प्रदेशको योजनामा समावेश गरी स्तरोन्नती तथा पिचको काम अगाडि बढेको छ ।
5. रुपा गाँउपालिकाको केन्द्र फालभञ्जाङ जोड्ने रामकोट रामदी स्तरोन्नति गरी ५.१ कि.मी.अस्पाल पिच गर्नको लागि द्रुत गतिमा काम अगाडी बढेको छ ।
6. फालभञ्ज्याङ्ग चिसापानी मो.बा.द्रुत गतिमा पिच गर्ने कार्य अगाडी बढिरहेको छ ।
7. गाउँपालिका स्तरीय प्याराफिटसहितको स्टेडियम द्रुत गतिमा निर्माण कार्य अगाडी बढिरहेको छ साथै यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने नीति लिइएको छ ।
8. गाउँपालिका भित्रका सबै वडामा खेल मैदान बनाउने कार्यक्रमलाई निरन्तारता दिइनेछ ।
1. महिला तथा बालबालिकाको आय आर्जन, क्षमता विकासका लागि उपाध्यक्षसंग महिला कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
2.दलित समुदायको परम्परागत पेशालाई संरक्षण र आय आर्जनमा उक्त पेशाकोप्रयोगका निमित्त आधुनिकीकरण गर्नका लागि आवश्यक तालिम तथा कार्यक्रम राखिनेछ । साथै दलित,जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग कुमाल, बोटे जलारी, मुश्लिम, अपाङ्ग,सहिद परिवारको आय आर्जन अभिवृद्धि गर्ने उदेश्यले लागतसहभागितामा आधारित ब्यवसायीकरण अनुदान तथा तालिमको ब्यवस्था मिलाईनेछ ।
3. अपाङ्गहरुको आय आर्जन लक्षित गरी गाउँपालिका र गैरसरकारी संस्थाको समन्वयमा विभिन्न आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रवन्ध गरिनेछ ।
4. रुपा गाउँपालिकामा रहेका जेष्ठ नागरिकहरु गाउँपालिकाका सम्पत्ति भएकाले उनीहरुको पारिवारीक दायित्व बोध गराउनको लागि पारिवारिक मिलान सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
5. रुपा गाउँपालिका भित्रका ३ स्थानहरुमा (वडा नं. ४, ५ र २ मा) बहुउद्देश्यीय जेष्ठ नागरिक दिवा मनोरञ्जन घर निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।
1. विपद्का दृष्टिले जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी आबश्यक बजेट तथा जनशक्ति व्यबस्थापन गरी विपद् बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गरिनेछ
2. गाउँपालिकामा विपद् व्यबस्थापन कोष खडा भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । विपद्को बेला खोज, उद्धार, राहत र पुनस्थापना गर्न विपद व्यबस्थापन कोषमा रकम थप गरी विपद् पछिको उद्धार, राहत र पुर्नलाभमा खर्च गरिनेछ । साथै विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धारका लागि हरेक वडामा तालिम संचालन गरिनेछ ।
3. विकास निर्माणका काम गर्दा वातावरणमैत्री विकास गर्न जोड दिइने छ । जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
4. वातावरण मैत्री स्थानीय शासनका मुलभूत मान्यतालाई आत्मसाथ गरिने छ । भु संरक्षण र जलाधार संरक्षणमा जोड दिइने छ ।
5. बाढी पहिरो नियन्त्रणको लागि लागत सहभागितामा आधारित भई तारजालिको वितरण गरिनेछ ।
6. सामुदायिक वनको संस्थागत विकासमा आवश्यक काम गरिनेछ ।
1. रुपा गाउँपालिकामा आगामी वर्ष सबै वडाहरुमा डिजिटल वडापत्रको व्यबस्था गरिनेछ ।
2. सार्वजनिक सेवा प्रवाह र शुसासन नतिजामूलक व्यबस्थापनको नीतिलाई अबलम्बन गरी सेवा प्रबाहलाई नागरीक र विकासमैत्री बनाईनेछ ।
3. सार्वजनीक सेवालाई पारदर्शी, जवाफदेही, उत्तदायी र नागरीकमैत्री बनाइनेछ । गाउँपालिकाले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाको गुणस्तर सुनिश्चित गरिनेछ । सुशासनका लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरलिकृत गरिनेछ ।
4. गाउँपालिकाको नियमित सार्वजनिक सुनुवाई र सामाजिक लेखा परिक्षणका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
5. स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा, खर्चको लेखाङ्कन र एकीकृत प्रतिवेदन गर्ने प्रयोजनका लागि क्गत्च्ब् लागु गरी लेखाङ्कन व्यबस्थित गरिने छ ।
6. सार्वजनिक सेवालाई विद्युतीय प्रणाली मार्फत संचालन गर्न जोड दिइनेछ ।
7. जनताले पाउने न्याय सम्बन्धी सेवा पाउनकालागि न्यायीक पद्धतीलाई प्रभावकारी बनाइने छ । साथै हरेक वडाहरुमा मेलमिलाप कर्ता साथै मेलमिलाप केन्द्रहरुको स्थापना गरिने छ ।
8. स्रोत साधनका अबैध र अत्याधिक दोहनको नियन्त्रण र ब्यवस्थापन गर्न उपर्युक्त नीति बनाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
9. सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सबै जनप्रतिनिधी र कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गरिनेछ ।
10. विकास योजना तथा सेवा प्रवाहको कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी, नतिजामुखी, गुणस्तरीय, जवाफदेही बनाउन अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली थप प्रभावकारी बनाइने छ ।
11. डिजिटल भिलेज प्रोफाइललाई पूर्णता दिई सो को तत्थ्याङ्कका आधारमा लक्षित बर्गका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
शितलादेवी माविमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सयोगमा भवन बन्ने	३ श्रावण २०७७, शनिबार ०३:५४
लोक गायक प्रेमराजा महत दम्पतीलाई कोरोना संक्रमण ८ असार २०७७, सोमबार १३:५२
टिकटक र विच्याट प्रतिवन्ध गर्ने ट्रम्पको आदेश महत्वपूर्ण होइन– विज्ञ ८ असार २०७७, सोमबार १३:५२
हङकङको स्वतन्त्रता खोसिनुमा जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै अमेरिकाले लाममाथि लगायो प्रतिबन्ध ८ असार २०७७, सोमबार १३:५२